Aung San Suu oo baajisey ka qaybgalkeedi shirka loo dhan yahay ee Qaramada Misoobay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Aung San Suu oo baajisey ka qaybgalkeedi shirka loo dhan yahay ee Qaramada Misoobay
Aung San Suu oo baajisey ka qaybgalkeedi shirka loo dhan yahay ee Qaramada Misoobay
September 13, 2017 - By: Abdirizak Shiino
Mustashaarka Dowladda Myanmar (Burma) Aung San Suu Kyi ayaa maalmihii u danbeeyey waajahaysey eedaymo la xiriira sida ay ula dhaqantey xasuuqa lagu hayo dadka Muslimiinta ah ee dalkeeda ee qawmiyadda Rohingya. Haweeneydan oo horey ugu guuleysatey abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa hadda ka baaqsatey in ay ka qaybgasho shirka loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey ee bishan ka dhacaya magaalada New York.
Afhayeen u hadley Xisbiga ay hoggaamiso Aung San Suu ee NLD ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in Aung San Suu Kyi hoggaamiyaha qaranka Myanmar ay ka baaqsatey shirka loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey ee dhacaya 20 siteembar 20.
Lama soo bandhigin sabab ay uga baaqsatey shirkaas.
Banaabaxyo ka dhan ah Aung San Suu
Aung San Suu Kyi ayaa la aaminsan yahay in ay shirka uga baaqsatey dhaleecaynta xooggan ee dusha looga tuurey sida ay ula dhaqantey Muslimiinbta laga badan yahay ee dalkeeda, kuwaas oo loo geystey xasuuq isirkooda lagu tirtiraayo, haweeneydan ayaan ilaa hadda ka hadlin waxa dalkeeda ka socda. Dhanka kale waxaa nusmalyuun oqf ay saxiixeen codsi ah in ay dib u soo celiso abaalmarintii Nobel ee ay ku guuleysatey sdanadkii 1991, taas oo aysan mudan hadda in ay magacaas sii haysato.
Dad lagu qiyaasay 370,000 oo ka mid ah Muslimiinta Rohingya ayaa u baxsadey dalka Bangladesh tan iyo markii ay bishii hore sare u kaceen rabshadaha ka jira gobolka Rakhine ee galbeedka Myanmar.